Kakhulu-Scenic zemininingwane Uhambo in Switzerland Ngo Summer | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kakhulu-Scenic zemininingwane Uhambo in Switzerland Ngo Summer
(Kugcine ukubuyekezwa On: 30/12/2019)
Kungashiwo ukuthi Switzerland is kunazo owaziwa ngokuba yayo iziqongo seqhwa futhi chocolate okumnandi, kodwa kukhona okuningi kakhulu ukuba ezweni elihle kunokubonwayo. Izincwajana zemininingwane Uhambo eSwitzerland ungomunye yezindlela ezingcono kakhulu ukuze ujabulele emaphandleni enhle. Yenza okuningi ngesikhathi sakho wachitha khona. I sezulu efudumele kwenza yakho uhambo kujabulise nakakhulu. Lezi ezinye kakhulu ebabazekayo zemininingwane Uhambo eSwitzerland ngo Summer.
I-Glacier Express phakathi St. Moritz futhi Zermatt ingenye zemininingwane Uhambo eSwitzerland
Lena ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu eyaziwayo Okhahlamba izitimela ebabazekayo futhi ngesizathu esihle. isitimela yohambo phakathi St. Moritz futhi Zermatt nge Chur, Andermatt, futhi uBrigadier. Uhambo egcwele usuku isitimela kodwa abantu abaningi ukhethe ukukwenza phezu izinsukwana. Bachitha isikhathi esithile e-ezihlukahlukene izindawo endleleni. Summer ingenye izikhathi ethandwa kakhulu ukuya futhi kukhona afika kwamane uhambo ngelanga phezu kwalesi sikhathi. Abaningi ebabazekayo ingxenye lokhu uhambo ngesitimela isigaba phakathi Chur futhi St. Moritz. Lapha uzothola ukuhamba phezu ngokuvamile-izithombe Landwasser viaduct ukuthi uphela Umhubhe.
Zurich St Moritz Izitimela
Zermatt St Moritz Izitimela
Lyon St Moritz Izitimela
Basel St Moritz Izitimela
Golden Pass Line eGeneva
Ayikho Uhambo zemininingwane e Switzerland kungaba ephelele ngaphandle ukugibela leli Golden Pass Line. Isitimela isuka Lake Lucerne eGeneva noma Zurich eGeneva kulabo siba sincane isikhathi ezandleni zabo. uhambo ngamunye nje emangalisa njengokubhonga nezinye. Kukhona ukubukwa ka eziyisishiyagalombili Switzerland omangalisayo amachibi okwesibhakabhaka, phezu maqembu amathathu entabeni futhi phakathi izifunda ezimbili ulimi (French naseSwitzerland okhuluma isiJalimane). Ukuthatha wonke uhambo kudinga ukushintsha izitimela izikhathi eziningana kodwa izinto zenza konke lokho kube. Abagibeli kudingeka ukubambela esihlalweni sabo kwezinye izitimela izimoto. Qiniseka ukuthi ukuhlela kusengaphambili zalolu hambo!
Lyon eGeneva Izitimela
Zurich eGeneva Izitimela
Paris Geneva Izitimela
Lucerne eGeneva Izitimela
Jungfraujoch Phezulu I-Europe
Nakuba kungase kube Summertime eSwitzerland ucindezelwe ukubona lawo magquma abadumile ezimhlophe unyaka wonke futhi uma ezintabeni snowy kukhona okufunayo kuka esiteshini Jungfraujoch iyindawo udinga ukuvakashela. Lona eliphakeme esiteshini eYurophu futhi engafinyelelwa ngokudoba isitimela esuka Kleine Scheidegg. Imibono kusukela uhambo isitimela e-Switzerland kukhona okuthile okukhethekile futhi uhambo ukuze uthole kukhona ephelele Ukwakha-up ukuze isiphetho grand. Lolu hambo kuyinto nakanjani eyodwa ukuze ungeze uhlu.
Ziningi isitimela Amazing uhambo ukuthatha kodwa lawa phakathi phezulu ebabazekayo kunazo zemininingwane Uhambo eSwitzerland ngo Ihlobo oluzayo. Iyiphi indlela engcono ujabulele kwelanga amukele izimangaliso phansi leli zwe elihle ukwedlula ngesitimela? Asikwazi ukucabanga ngendlela ephelele ukuze ubone Switzerland ngakho ngisindise abathile imali futhi isitimela sokuvakasha.
Ukubhuka ithikithi Isitimela esihamba European? Kungani ungake uzinike 3 imizuzu kusayithi lethu ukuthola eshibhe isitimela uhambo eSwitzerland uhambo lwakho isitimela. Ngena ngemvume ukuze indawo yethu manje incwadi izitimela amathikithi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-most-scenic-train-trips-in-switzerland-in-summer%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
SwissAlps Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela travelswitzerland